CIIDAMADA KENYA OO DEEGAANKA LIKOOLEY KU DILAY GUDDOOMIYIHII DEGMADA CEELCADDE - iftineducation.com
iftineducation.com – Sida ay sheegayaan wararka aan ka helayno Deegaanka Likooley oo ka tirsan Gobolka Gedo, ciidamada Kenya ayaa deegaankaasi shalay galab waxa ay ku dileen Guddoomiyihii Degmada Ceelcadde ee Gobolka Gedo.
Guddoomiyihii Degmada Ceelcadde ayaa u xirnaa ciidamada Kenya tan iyo markii uu dhacay weerarkii 15–kii Bishan ka dhacay Saldhiga ciidanka Kenya ee Degmadaasi.
Korneyl Aadan Rufle oo ka tirsan Saraakiisha ciidamada Millateriga Dowladda ee Gobolka Gedo, ayaa xaqiijiyay in Askarta Kenya shalay galab ay dileen Guddoomiyihii Ceelcadde.
Ciidanka Kenya ayaa sababta Guddoomiyihii Degmada Ceelcadde ay u dileen waxa ay tahay inay ku eedeeyeen qaar ka tirsan ilaaladiisa inay ku lug lahaayeen weerarkii Abaabulnaa ee ka dhacay Degmada Ceelcadde.
Madaxweynaha Kenya ayaa horay ugu eedeeyay Beesha Mareexaan ee Gobolka Gedo Degta inay fududeysay weerarkii ka dhacay Ceelcadde.
Guddoomiyihii Degmada Ceelcadde ee la dilay, ayaa lagu magacaabi jiray C/rashiid Cali Cabdi Qoorleex.
Saraakiisha ciidamada Dowladda ayaa si aad ah u cambaareeyay falkaasi lagu dilay Guddoomiyihii Degmada Ceelcadde.